Ingcindezi - iyona ratio amandla okuyinto ethatha perpendicularly kwamanzi endaweni yaleli ebusweni. izingcindezi ulinganiswa Pascals (1 Pa - ingcindezi yokuthi amandla 1 Newton ukhiqiza kwelinye imitha square yayo endaweni yesicelo kwamanzi).
Amandla ingcindezi - kuba namandla yokuthi ubeka ingcindezi surface ezithile. It is kulinganiswa ngo Newtons (N 1). I umncane indawo ephindwe, okuyinto ngaphansi kwengcindezi, kancane kungenziwa amandla ngawo nomphumela ofiselekayo bungatholakala isicelo.
ingcindezi amandla izenzo phezu perpendicular ke. Ngeke ulinganiswa ingcindezi. Ukuze ubone ukuthi ukucindezela ezidingekayo ukumphoqa ukuba wabelane endaweni ebusweni lapho kubonakala. Uma sisebenzisa amandla efanayo ukwenza phezu lobehlukene, lokhu kucindezela kuzokwanda ibe nkulu lapho kukhona contact endaweni engaphansi. Uma wazi ingcindezi futhi surface area, amandla ingcindezi zingatholakala ngokuvele azalane ingcindezi ndawo.
Amandla ingcindezi evamile njalo ngempela iqondiswe perpendicular ebusweni ngalo kunemtselela. Ngokusho eyesithathu umthetho Newton kuyinto elilingana nebutho ukuthi bayavuma phansi iyunithi wakhe.
Indima ingcindezi amandla uyakwazi ukudlala yimaphi amandla. Lokhu kungaba isisindo okuyinto deforms ukusekelwa noma amandla kokucindezela umzimba ukuze surface ethize, nokunye.
Ngo ukuxhumana emizimbeni okuqinile ketshezi isinyathelo nabo enebutho ezithile, ababiziweyo - ingcindezi amandla. Ekuphileni kwethu kwansuku zonke, ukuzizwa umthelela ibutho ezifana kungenzeka, esehlanganise isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu umunwe imbobo okuvela kulo amanzi. Uma ibhaluni iraba uthele mercury ukuthi kuyabonakala ukuthi izindonga zalo ngeke iqhubu olubonakalayo. Amandla ingcindezi uketshezi okungenzeka bahlukunyezwe futhi olunye uketshezi.
Ngo contact ukudla okuqinile amandla nokunwebeka kuphakama lapho beshintsha isimo sabo noma ivolumu. Ngo uketshezi ezinjena kuphoqa lapho ifomu azisenzeki. Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela kuyaqina ngenhlonipho yezinguquko ukuma inquma ukuhamba eziwuketshezi. Lapho ukugxisha uketshezi (ushintsho amavolumu yabo) babonakalise amandla nokunwebeka. Yibo labo okuthiwa ingcindezi amandla. Okusho ukuthi, uma izenzo uketshezi kwi ukuxhumana nabanye umzimba wakhe ngebutho ingcindezi, ngakho-ke usesimweni onomfutho. Lapho onomfutho ketshezi kuyovela namandla ngenxa ingcindezi amandla.
Ngenxa yalokho, i-kokucindezelwa kwandisa kwabantu izinto, Nokho uketshezi babe nokuqina esizibonakalisa maqondana kwabantu babo. Uma umkhumbi ivaliwe ngumuntu piston nendawo phezu umthwalo, uketshezi iqala zizincane kakhulu uma le piston lehliselwa. It kuyovela ingcindezi amandla okuyinto counterbalances isisindo piston umthwalo elise kuso. Uma siqhubeka ukwandisa umthwalo phezu piston, uketshezi uzoqhubeka shwabanisa, kanye nokudinga okwandayo ingcindezi amandla kuhloswe ngazo silinganisa umthwalo.
Zonke okusamanzi (ucishe) kungenziwa onomfutho, ngakho-ke kungenzeka ukukala degree of kokucindezelwa, elihambisana ingcindezi ethile amandla.
Ukuze kuncishiswe ingcindezi phezu, uma kungenakwenzeka ukuba kuncishiswe amandla adingekayo ukuze wandise indawo ukwesekwa. Ngakolunye uhlangothi, ukuze basicindezele labanti ladzingekako kute kuncishiswe endaweni lapho ibutho lakhe izenzo.
La ma-molecule igesi njengoba ungahlobene nalo muntu (noma kakhulu alengayo exhunywe) phakathi ukuxhumana amandla. Ngakho they nyakazo ngezinga elingafani, cishe ngokukhululekile, ukugcwalisa wawuqeda wonke lo mqulu bomkhumbi enikeziwe kubo. Kule ndaba, izakhiwo igesi zehluke izakhiwo eziwuketshezi. Ngesikhathi ukuminyana igesi incike ingcindezi ngezinga elikhulu kakhulu e uketshezi. Inkolelo evamile phakathi kwabo ukuthi ingcindezi ketshezi kanye negesi akuxhomekile ukuma uyisitsha zingase ibekwe.
Umlando wamamephu kwenyanga
Umsebenzi wokuqagela. umsebenzi zokwazisa kanye wokuqagela
Kuyini i-social science? Bogolyubov: Izifundo zomphakathi
Dyslalia ezinganeni nezindlela bawabulale yayo. Izimbangela, izimpawu, impatho dyslalia izingane
Ibhulashi elibom. Izimo futhi isicelo.
Martynchik Svetlana: biography, ubuciko
Kuyini ziphephile Museum kanye nemibukiso
Valuation kwempahla angaphatheki - ingxenye obucayi uhlu ibhizinisi
Pitcairn Island. British Overseas Territories elwandle eliKhulu iPacific
Adume kiss of uBrezhnev, okuyinto langena umlando wase-USSR
Priparat "Heparin": isitatimende